Inonakidza nezveIslam uye nharaunda yeMuslim
Iwe wakabvunza: Nyika dzechiIslam dzakamira sei?
Ndeipi nyika yeIslam yakanakisa munyika? Huwandu hwevanhu vechiMuslim hwakakura munyika iri muIndonesia, nyika kumusha kune 12.7% yevaMuslim vepasirese,…
Ndeipi chaiyo Eid Al Adha kana Eid ul Adha?
Eid-ul-Adha inogona zvakare kupereterwa ʾId al-Adha kana Eid-ul-Adha. Inowanzo kunzi Eid chete. Nekudaro, Eid inogona zvakare kureva mumwe mutambo, Eid-ul-Fitr, unoitika pa…
Mhinduro yakanakisisa: Chii chinonzi Islam pamusoro pekurumbidza?
Unoti kudii kana mumwe munhu akakurumbidza muIslam? Zvakadaro, kana mumwe munhu akakurumbidza, ingoti mazvita, uyezve kuti “alhamdulillah” (kurumbidza kwose ngakuve nokuda…
Mhinduro Yekukurumidza: Viniga ndeyeHalal kana Haram?
Mhinduro yekukurumidza: Waini vhiniga nebharisamu vhiniga zvinoonekwa seHaram sezvo zvine huwandu hwedoro. Mamwe marudzi ese evhiniga anoonekwa seHalal. Zviri…
Kangani Mwedzi unotaurwa muKorani?
Ko Korani inotaura nezvemwedzi here? Korani inosimbisa kuti mwedzi chiratidzo chaMwari, kwete pachawo mwari. Allah vakati chii nezvemwedzi?…
Ndedzipi kufambira mberi uko zera regoridhe reIslam rakatungamira?
Masayendisiti akafambira mberi mune zvealgebra, calculus, geometry, chemistry, biology, mishonga, uye nyeredzi. Mazhinji emhando dzehunyanzvi akabudirira panguva yeIslam yeGoridhe Age, kusanganisira ceramics, simbi, machira, akavhenekerwa…
Yaive Nizams Shia kana Sunni?
Kunyange zvazvo Asaf Jahs (Nizams), vatongi veyaimbova Hurumende yeHyderabad, vakanga vari vaMuslim vechiSunni, vakaramba vachitsigira kuchengetwa kweMuharram. Yakanga iri panguva yavo iyo yakakosha makoroni…
Mubvunzo wako: Sei Kaaba isiri chifananidzo?
Isu maMuslim hatinamate chifananidzo muMecca. Hatitombozvidaidza kuti Idol. Ibwe rakaiswa naMuporofita Mohammed muMecca chinangwa chikuru…
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Korani inotii nezvekodzero dzemukadzi?
MuKorani inoera (SWT) Allah vakataura nezvekodzero dzeroora kumudzimai. “Uye ipai vakadzi roora ravo sechipo. Zvino, kana vari…
Mubvunzo unogara uchibvunzwa: Ndevapi vatungamiri vaviri vakarwa kuti vatore guta dzvene reMecca kubva kumaOttoman muna 1803?
Vakanga vasimuka sesangano rechitendero muDira'iyya muNejd muna 1744-1745. Dzidziso yavo yakawana vashoma vanonzwira tsitsi muHejaz, uye Mufti weMecca akataura…
1 2 ... 837 Next
Zuva rakanaka kune vese! Ini ndinonzi Amir. Iri ndiro bhurogi rangu pamusoro peIslam nenyika yeIslam. Blog rangu richava nezvinyorwa pamusoro peIslam kubva pamaonero echitendero, pamwe nekuona kwemamwe masayenzi akadai sezvidzidzo zvechitendero, magariro evanhu, zvidzidzo zvetsika, mitauro, nezvimwewo, nezvimwe.
Ndinogona kushongedza imba yangu yeRamadan?
Bhangi Islam iri kushandisa sei DuitNow?
Chii chinoita kuti musikiti uve musikiti?
Ndezvipi zvinhu zvinotungamirira kukupararira kweIslam?
Ndeapi matavi maviri eIslam?
Kutenga tikiti rerotari Haram muIslam?
Mhinduro yakanakisa: Iwe unofanirwa kupfeka hijab kana uine mhanza?
Contacts | Nezvedu | Yakavanzika Policy & Cookies
TARIRA KUNE VAKARURAMA! Zvese zvinhu zvakamisikidzwa pane ino saiti ndezvekuitira ruzivo uye zvekudzidzisa zvinangwa! Kana iwe uchifunga kuti kutumira chero chinhu kutyora kodzero yako, ita shuwa kutibata nesu kuburikidza nefomu rekuonana uye zvinhu zvako zvinobviswa!